Xog: Maxaa ka jira in Taliyayaasha NISA & Booliska ay Farmaajo u gudbiyeen warqad Is casilaad ah? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Maxaa ka jira in Taliyayaasha NISA & Booliska ay Farmaajo u...
Xog: Maxaa ka jira in Taliyayaasha NISA & Booliska ay Farmaajo u gudbiyeen warqad Is casilaad ah?
Muqdisho (Caasimada Online)-Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Taliyaha Hay’ada Sirdoonka iyo Nabadsugida Qaranka Gen. Cabdullahi Gaafow Maxamuud iyo Taliyaha Ciidamada Booliska Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ay warqad Is casilaad ah u gudbiyeen Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo.
Taliyayaasha labada Hay’adood ayaa la sheegay in Madaxweynaha Somalia ay ka dalbadeen inuu akhbalo warqada Is casilaada, walow Madaxweynaha uusan wali ka jawaabin dalbka labada Taliye.
Warar hoose ayaa sheegaya in Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo uu labada Taliye ka dalbaday inay bixiyaan Xuquuqda Ciidamada Qaranka dhowrkii bil oo aysan bixin, wixii intaa ka danbeeya ay suuragal tahay inuu akhbalo dalabka Is casilaada.
Madaxweynaha ayaa la sheegay in labada Taliye uu Is casilaadooda xujo uga dhigay in marka hore ay bixiyaan dhaqaalaha muddo 4 bil oo ah Xuquuqda Ciidamada ee leys daba mariyay.
Dalabka Is casilaada ayaa la xaqiijiyay inuu ka danbeeyay kadib markii labada Taliye ay la kulmeen cadaadis dhanka amaanka ah.
Dhinaca kale, waxaan la xaqiijin karin in Madaxweyne Farmaajo uu ka laaban doono go’aanka uu labada Taliye uga dalbaday bixinta xuquuqda la musuqay si loo aqbalo Is casilaadooda maadaama ay ku hingooben Amniga.